माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता सम्भव छैनः डा. भट्टराई | BishwaGhatana
माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता सम्भव छैनः डा. भट्टराई
७ चैत २०७४ चितवन : नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग पार्टी एकता सम्भव नरहेको बताएका छन् । आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले पार्टी एकता र कार्यगत एकता सम्भव नरहेको स्पष्ट पारे ।
उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सबै कुरामा हारिसकेको, थाकिसकेको र पछाडि परिसकेको भन्दै उनले बोलेका कुराको टिप्पणी गर्नु औचित्य नभएको बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले आजै प्रदेश नं ३ र प्रदेश नं ४ ले आज भरतपुरमा आयोजना गरेको लुम्बिनी बैठकको भाव सम्प्रेषण एवं पार्टी आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सरकारले गर्ने कामका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने बताए । उनले भने, “ देश र जनताको हितमा हुने कामको समर्थन गर्दछौँ, जनता र राष्ट्र विरोधी कामको विरोध गर्छौं ।”
उनले पछिल्लो समयमा सरकारमा जान लालयित हुने धेरैको चाहना रहेको बताउँदै बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै तीन चौथाइ बनाउन आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, “लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनुपर्दछ । त्यसो भयो भने सत्तामा बस्नेले आफ्नो नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दछ ।”
उनले नेपालको ठूलो श्रमशक्ति विदेशमा पलायन भएको र उनीहरुबाट आएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र चलेको बताउँदै भने, “नोट चल्ने भोट नचल्ने जुन प्रणाली छ यो परिवर्तन हुनुपर्दछ ।” कार्यक्रममा नयाँ शक्ति पार्टीको हालै सम्पन्न लुम्बिनी बैठकको भाव सम्प्रेषणसम्बन्धी पाँच बुँदे घोषणाको सामूहिक संकल्प वाचन गरिएको थियो । उक्त वाचनमा देशमा समस्या छ, समस्याका कारण छ । समस्याको निवारण छ, पाँच ‘स’को माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने वाक्यांश शुरु गरी पाँच बुँदे घोषणाको सामूहिक पाठ गरिएको थियो । रासस
पहिलो समाचारग्राण्ड होटलमा भारतीय नागरिक मृत फेला अर्को समाचारडीपीएलको खेल तालिका सार्वजनिक, पहिलो खेल काठमाडौं र टिम चौराहा बीच हुने